दीपिका पादुकोणलाई शर्लिन चोपडाको कटाक्षः मा’ल फुकेर डि’प्रेशनको नारा - NepalTrending
दीपिका पादुकोणलाई शर्लिन चोपडाको कटाक्षः मा’ल फुकेर डि’प्रेशनको नारा
NepalTrending — October 12, 2020 add comment
एजेन्सी – बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतले ला’गू प’दार्थको सम्बन्धमा बलिउड माथि लगाएको आ’रोपको समर्थनमा अभिनेत्री शर्लिन चोपडाले समेत साथ दिएकी छिन। उनले क्रिकेटर र अरु पनि सुपरस्टारका पत्नीहरुले समेत ला’गू पदार्थ से’वन गर्ने गरेको आ’रोप लगाएकी छिन् । उनले हालै विश्व मा’नसिक दिवसको अवसरमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण माथि क’टाक्ष गरेकी छिन् ।
कंगना रनौतले ट्विटमा ‘हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर जागरुकता फै’लाउनका लागि फिल्म बनाएका हौँ । अ’दालतले ती व्यक्तिहरुलाई डाक्यो जसले डि’प्रेशनको पसल खोलेका थिए । मिडियाले ब्यान गरे पनि र फिल्म रिलीज हुनु भन्दा केही समय अगाडि फिल्मको नाम परिवर्तन गरिएको भएपनि फिल्मको व्यापार कम भएपनि फिल्म निकै राम्रो भएकाले मानसिक स्वास्थ्य दिवसको दिनमा ‘जजमेन्ट है क्या’ फिल्म हेर्न अनुरोध गर्छु’
उक्त ट्विट शर्लिन चोपडाले रिट्वि’ट गर्दै लेखेकी छिन्, ‘कंगना जी, तपाईंले सही भन्नुभयो । यी मान्छेहरु मा’ल फु’केर डि’प्रेश नको ना’रा लगाउँछन् । र देशका युवा पिढीँलाई अ’न्धकारमा धकेल्छन्। दुई छाक खान मजदुर बिहान बेलुका मजदुरी गर्छन् । के उनीहरुमा डि’प्रेशन छैन ? के डि’प्रे शनबाट बच्न मा’लको से’वन गर्ने हो ?’
गौरी मल्लको राष्ट्रपतिलाई पुकार: ‘राष्ट्रपति ज्यू! मलाई यो देशको नागरिक हुँ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आयो , अब त केही बोल्नुस्’
यस्तो छ झापामा गायिका रचना रिमालको घर ( भिडियो हेर्नुस )